Fikradda naqshadeynta falsafada loogu talagalay ragga iyo dumarka - Fikradaha farshaxanka
Fikradda naqshadeynta dareenka ee loogu talagalay ragga iyo dumarka
Sonitattoo August 9, 2016
Ma rabtaa inaad hesho tattoo #anku? Warka wanaagsan ee aad adigu u leedahay sababtoo ah waxay noqotay mid caan ah oo dad badani ay isticmaalayaan si ay sheekooyinka u sheegaan.
Ma waxaad ka fekereysaa helitaanka tattoo? Is-naso haddii aad baqeyso sababtoo ah adigu maaha qofka kaliya ee la kulma arintan.
Ubax Sawir-qaadaha qashinka
Helitaanka #tattoo ugu horeysa waxay noqon kartaa khibrad cabsi iyo xiiso leh. Waxaa jira waxyaabo badan oo su'aalo ah oo aad doonayso inaad waydiiso iyo baaritaano si aad u xaqiijiso inaadan qalad sameyn.
Cute Tattoo Ankle
Waxaa jira waxyaabo ay tahay inaad ogaato kahor intaadan helin tattookaaga. Waa inaadan deg degin nidaamka. Habka, # muuqaal iyo fiiri waa qaar ka mid ah qaybaha muhiimka ah ee tattoo.
Saltooska fudud ee fudud
Waxyaabaha soo socda ee aad ka fekeri karto waa fanaaniinta iyo meesha aad ka heli karto. Waa inaad waqti qaadataa si aad u eegto naqshado badan oo internetka ah.
Tattoo faaruq adag
Iyada oo naqshad la mid ah sida farshaxankaagu wuxuu awoodi doonaa inuu helo #idea waxa aad runtii rabto.
Qabooji Tattoo daboolka
Waxaa jira qaabab badan oo tafaariiq ah oo tafaariiq ah oo online ah oo aad kala dooran karto. Haddii aadan awoodin inaad kala doorto naqshado farabadan sida tattoo this, ka dibna sanadkaagu wuxuu sameyn karaa naqshad laguu qaabeynayo adiga.
Tattoo Cout Pure Ankle
Waa inaad ahaataa 100% qanacsanaanta naqshadeynta ka hor intaadan sameynin doorashadaada.
Tattoo Fikrado Lacageed
Qolalka aad ka heli kartid alaabtaada waa in dib loo eegaa. Habka ugu fudud ee lagu heli karo macluumaadkan waa marka aad eegto shaqada internetka ee lagu sawiray si aad u aragto.
Tattoo Male Dhallin ah
Waxaad booqan kartaa saldhigga haddii aad rabto inaad hesho sawir cad oo ah waxa dhaca. Heerarka caafimaadka, macaamiisha iyo farshaxanku waa qaar ka mid ah waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ka fikirto inta aadan bilaabin naqshadaaga.
Tattoo faaruqin ah
Weydii su'aalo haddii ay tahay inaad leedahay tattoo gaar ah sida tan. Tattoo sax ah waa wax aanad iska indha tiri karin markaad aragto.
Si aad u hesho tattoo sida quruxsan sida tan, waxaad u baahan tahay inaad weydiiso su'aalo si aad u hubiso in aad ku sugan tahay jidka saxda ah ee artist.
Markaad ku kalsoonaato geeddi-socodka, ka dibna waxaad heleysaa raaxo ah in aad hesho tattoo. Waxaa muhiim ah in aad fahamsan tahay in naqshadeynta tattoo this noqotey mid muhiim ah. Waa inaad wakhti ku qaadataa inaad raadiso adigoo adeegsanaya buugta internetka ee anqawka kahor intaadan qaadan doorashadaada. Marka ugu horeysa ee aad sameyso waa inaad hesho tattooist oo kuu sheegi doona waxa ku jira munaasabadda.
Haddii ay tahay markii ugu horeysay ee aad u hesho tattoo, waxaan kugula talin doonnaa in aad bilawdo. il image
Xiddiga Lagu Sameeyo Tattoo
Finesse iyo murqaha tattoo anqawga ayaa ka dhigay mid ka mid ah kuwa ugu raadsaday ka dib. Ma aha oo kaliya gabdhihii doonaya tattoo-ka laakiin sidoo kale ragga sababtoo ah quruxda ay bixiso qofka xiran. il image
Tattoos Fikrado Hal-abuur leh
Dad badan oo isticmaala tattoo markii ugu horeysay waxay u tagaan tattoo this maxaa yeelay waa mid aan muuqan ama weyn. Waxay kaa caawinaysaa inaad hesho kalsooni aad u rabto inaad hesho ka hor intaadan duurka aadin iyo ka weynba. il image
Sababta ay dadku u bilaabi karaan marka ay taataabanayaan sida quruxda badan sababtoo ah waxay rabaan inay wax badan ku daraan ama xitaa isbeddel maskaxeed si ay u bedelaan. il image
Tattoos Leaf Dhuxul
Waxaan dooneynaa inaad fahamto waxyaabo yar ka hor intaadan aadin tattoo-gaaga. Dhamaan tattoosku wuu dhaawacmayaa markaad gashid xitaa tattoo canqowga. il image
Saltoos qashinka ah
Si kastaba ha ahaatee, waxaan ognahay in qaar ka mid ah xanuunada ugu badan ee tattooskani ay yihiin kuwa aan helno maqaarka xasaasiga ah, wax gudaha, laabta iyo xitaa dhabarka. il image
Ma iloobin in maqaarka kuugu dhow laftaada uu si xun u dhaawici karo markaad isku dhejiso. il image
Markaad ka fekereyso tattoo canqowga, xanuunku maaha wax badan sababta oo ah dad badan ayaa u socda. il image
Sababtu waa sababta oo ah marwalba waa ay yar yihiin. Waxaa jira xal loogu talagalay kuwa aan qaban karin xanuunka tattoo. Dhammaan waxay ubaahanyihiin inay sameeyaan waa inay codsadaan in qoryaha qallalan ee qallalan ee aan u baahnayn in meel la dhigo. il image
Saltooska qaaska ah ee Rose Rose
Waad ku garaaci kartaa quruxda oo la timaada qalinka tattoo sidan oo kale. Waxaan aragnay jimicsiga guntiga laakiin markaad ku darto wax yar oo ka mid ah sawiradan tattoo this on anqawga, waxay si cad u saameyneysaa saameyn weyn. Wakhti ma qaadato si aad u hesho tattoo qurux badan sida tan. Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad hesho fanaan xirfad leh si aad sawiradaada u sameyso. il image
Tattoos foorarsan oo la yaab leh
Halkan riix halkan si aad u hesho sawirro badan oo Tattoo Tattoo
naqshadeynta mehndilibto libaaxtattoos qosol lehsawir gacmeedsawirrada raggashimbir shimbirsawirada malaa'igtatattoos ubaxTilmaamta jaalaha ahjimicsiga bisadahatattoo maroodigatattoo biyo ahgadaal u laaboDhaqdhaqaaqatattoos taajkiihenna tattootattoo tilmaantattoos moonTattoo Feathercalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahtattoos iskutallaabtatattoos eagleku dhaji tattoosTattoo infinitytattoo dheemantattoos sleevefikradaha tattootattoo ah octopusshaatiinka shiidantattoos qoortaJoomatari Tattoostattoos qorraxdalaabto laabtalammaanahawaxay jecel yihiin tattoosmuusikada muusikadasawirada gabdhahatattoos gacantakoi kalluunkatattoos qabaa'ilkawaxaa la dhajiyay tattoosarrow TattooTartoo ubax badantattoos saaxiib saxa ahTattoos Wadnahatattoo indhahatattoos cagtagaraacista gacmahataraagada kubbaddatattoos